Taabit Cabdi "Qoraalka NISA waa bannaan-dood waxaa ka muuqda caburin loo fasiran karo..." - Jowhar Somali Leader
Home Somali Taabit Cabdi “Qoraalka NISA waa bannaan-dood waxaa ka muuqda caburin loo fasiran...
Duqii hore ee Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ahna Hoggaamiyaha Xisbiga Awoodda Shacabka ayaa si adag uga falceliyay qoraalkii NISA ku soo qortay barteeda Twitter-ka oo eedeymo loogu soo jeediyay wariye Harun Macruf.
Taabit Cabdi ayaa sheegay in Harun Macruf uu yahay wariye rug cadaa ah, lana hubo dhex dhexaadnimadiisa shaqo iyo shaqsiyad.
“Haddii eedeyn jirto hay’addii laheyd lama marin. Qoraalka NISA marka laga tago inuu noqday bannaan-dood, waxaa ka muuqda caburin loo fasiran karo waxaanan anigu rabin ninkii wariyey weyso uma dhowrna”ayuu yiri Taabit Cabdi.
Dad kala duwan oo siyaasiyiin iyo Wariyeyaal isugu jira ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay eedeynta NISA, waxaana qaarkood ay su’aalo ka keeneen habka ay NISA u martay eedeynta wariye aan dalka ku sugneyn iyo in aanay aheyn Hey’ad anshax marin ah ama Hey’ad Garsoor, marka loo eego eedeymaha ay u soo jeedisay wariyaha oo ah inuu khatar ku yahay Amniga Qaranka.
NISA ayaa looga fadhiyaa inay soo bandhigto caddeymo muujin kara eedeymaha wariyaha ay u jeedisay Wariye Harun Macruf, waxaana dad badan sugayaan halka ay ku dambeyn doonto xaalada NISA ay abuurtay oo saacadihii u dambeeyay si weyn u qabsaday baraha bulshada.